အခမဲ့ BF စမတ် Scalper EA ၏ - အကောင်းဆုံး Forex EA ရဲ့ | ကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ | FX စက်ရုပ်
ပင်မစာမျက်နှာအခမဲ့ Forex ကွက်အခမဲ့ BF စမတ် Scalper EA ၏
ဤသည်၏အပြည့်အဝအလိုအလျောက်အခမဲ့ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ် BF စမတ် Scalper ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး.
အားလုံးပါရမီသောအရာတို့ကိုလှပသောရိုးရှင်းသောဖြစ်ကြသည်။ BF စမတ် Scalper EA ၏ အလွန်ရိုးရှင်းပြီးပေမယ့်စျေးကွက်တည်ရှိစဉ်ကတည်းကကအများဆုံးသက်သေပြကုန်သွယ်နိယာမအပေါ်အခြေခံသည် - တစ်ဦးကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဆုံးမပဲ့ပြင်တွေ့ရှိပြီးနောက်တစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့စျေးကွက်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့၏ညှနျကွားထဲမှာစျေးကွက်ရိုက်ထည့်ပါ။ ဒီကုန်သွယ်နိယာမ၏အဓိကပြောင်းလဲဘယ်တော့မှတံ့သောကျွန်တော်တို့ရဲ့နက်ရှိုင်းစွာကုဒ်သွင်းလူ့စိတ်ပညာဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါရည်မှန်းချက်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ခဲ့သည် BF စမတ် Scalper EA ၏ တတ်နိုင်သမျှရိုးရှင်းသည့်ကွေး-သင့်လျော်သည်ကို EA ကုန်သွယ်၏အကြီးမားဆုံးရန်သူဖြစ်သောတားဆီးနိုင်ရန်အတွက်။
အခမဲ့ BF စမတ် Scalper EA ၏အင်္ဂါရပ်များ
ဘယ်အချိန်မဆိုကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ 24 /5ကုန်သွယ် - အဘယ်သူမျှမဂရင်းနစ်စံတော်ချိန်ပြောင်းကုန်ပြီကူညီပြီး
ကျိုးကြောင်းဆီလျော် TP နှင့် SL အဆင့်ဆင့်
လွယ်ကူသော optimization နှင့်မျှမကွေးလျောက်ပတ်စိုးရိမ် - system ကို parameters များကိုအသေးစားအရေအတွက်ကို။
အစိုင်အခဲ 18 နှစ် backtest စွမ်းဆောင်ရည်ကို
သင်ကသင့်ရဲ့အကောင့်အရေးပါမှုနှင့်သင့်အန္တရာယ်နှင့်အမြတ်မျှော်လင့်ချက်များအရသိရသည် 2% (မြင့်သောစွန့်စားမှု) အထိအော်တို MM = 10% (အနိမ့်အန္တရာယ်) ကိုသုံးနိုင်သည်။
ကျိုးကြောင်းဆီလျော် fixed လောတအရွယ်အစား 0.05k အကောင့်ချိန်ခွင်လျှာအပေါ် 1 ဖြစ်ပါသည်, သို့မဟုတ် 0.5k အကောင့်ချိန်ခွင်လျှာအပေါ် 10 စာရေးတံ။
ထောကျပံ့ငွေကြေးအားလုံး: GBPUSD, EURUSD, USDCHF
default settings ကို GBPUSD အဘို့ဖြစ်ကြ၏။ အဆိုပါစက်ရုပ်များလွန်းအခြားငွေကြေးအားလုံးပေါ်တွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
သင်က EA ၏အပေါ် run နိုင်ပါတယ် M1 or M15 ဇယား - အားလုံးအသုံးပြုသောအချိန်ပြကွက် hardcoded ဖြစ်ကြသည်ကြောင့်, ထို EA ၏အဘို့အဘယ်သူမျှမခြားနားချက်ကိုမှန်ကန်စေသည်။
သင် "ပွင့်လင်းသောစျေးနှုန်းသာ" နည်းလမ်းအားဖြင့် M1 ဇယားအပေါ်ကို EA backtest နှင့်ပိုကောင်းအောင်နိုင်သည် - ဒီအလုံအလောက်မှန်ကန်သောဖြစ်နှင့်သင်အချိန်အများကြီးကယ်တင်မည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့, ကုန်သွယ်ရေးအတွက်သန့်ရှင်းသောဘုရား Grails စိတျထဲမှာဝက်ဝံမတည်ရှိပါဘူးကျေးဇူးပြုပြီး! ပင်အကောင်းဆုံးစနစ်ကတချို့မကောင်းတဲ့ကာလကြုံတွေ့နေကြရသည်။ BF စမတ် Scalper EA ၏ အလွန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော် SL အဆင့်ဆင့်အသုံးပြုနေသည်, ဒါသူတို့မကောင်းတဲ့စျေးကွက်အခြေအနေ / အကြိမ်ကြိမ်ပင် / ဝင်တိုက်ရနိုငျသညျ။
မျှော - မှော်ဂဏန်း - စက်ရုပ်အားလုံးအတွက်ဤကွဲပြားမှုကိုထားရန်အလွန်အရေးကြီးသည်
EA_Comment - ကုန်သွယ်ရေးမှတ်ချက်အနေဖြင့်သတ်မှတ်ထားသည့်စာသား
MaxSpread - အများဆုံးခွင့်ပြုပြန့်ပွား
Slippage - အများဆုံးခွင့်ပြုထားသော slippage
StopLoss - စံ 4-digit pips များတွင် stop loss တန်ဖိုး - သင့်လျော်သောတန်ဖိုးအကွာအဝေး 30-100, opt ။5ခြေလှမ်း
TakeProfit - စံ4digit pips များတွင်အမြတ်အစွန်းတန်ဖိုးယူပါ။ သင့်လျော်သောတန်ဖိုးအကွာအဝေး 5-30, opt ။ 1 ခြေလှမ်း
BandPeriod - Bollinger Bands ကာလ - ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောတန်ဖိုးအကွာအဝေး 5-20, opt ။ 1 ခြေလှမ်း
BandBreakEntry - ဆန့်ကျင်ဘက်ကုန်သွယ်မှုကိုစတင်ရန် BB လိုင်း၏ 4- ဂဏန်း pips များကိုချိုးဖျက်ခြင်း (တန်ဖိုးအနှုတ်ဖြစ်နိုင်သည်) - ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောတန်ဖိုးအကွာအဝေး 0-5, opt ။ 1 ခြေလှမ်း
BandBreakExit - လက်ရှိကုန်သွယ်မှုပိတ်ခြင်းကိုစတင်ရန်ဆန့်ကျင်ဘက် BB လိုင်း၏ 4- ဂဏန်း pips များကိုချိုးဖျက်ခြင်း (တန်ဖိုးအနှုတ်ဖြစ်နိုင်သည်) - ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောတန်ဖိုးအကွာအဝေး (-5) မှ 5, opt ။ 1 ခြေလှမ်း
MA_Fast_Period - လျင်မြန်စွာရွေ့လျားပျမ်းမျှကာလ - ကျိုးကြောင်းဆီလျော်တန်ဖိုးအကွာအဝေး 1-20, ရွေးချယ်ပါ။ 1 ခြေလှမ်း
MA_Slow_Period - ပျမ်းမျှရွေ့လျားမှုနှေးကွေးသောကာလ - ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောတန်ဖိုးအကွာအဝေး 20-120, ရွေးချယ်ပါ။5ခြေလှမ်း
Trend_Impulse စျေးကွက်လှုံ့ဆော်မှု၏အားသာချက် - တန်ဖိုးသင့်လျော်သောတန်ဖိုးအကွာအဝေး 0-60 opt ။5ခြေလှမ်း
MA_Trend_TF - နှစ်ဦးစလုံးစရဖ၏အချိန်အပိုင်းအခြား။
FixedLots - ကုန်သွယ်စာရေးသည့်အခါ AutoMM =0fixed ။
AutoMM - ပိုက်ဆံစီမံခန့်ခွဲမှု။ ဥပမာအားဖြင့်, AutoMM =5စက်ရုပ် 5% အန္တရာယ်နှင့်အတူကုန်သွယ်မှုမည်ဟုဆိုလိုသည်။
အခမဲ့ BF စမတ် Scalper EA ၏ Download